I-china excavator yokuhambisa umhlaba iemele abavelisi kunye nabathengisi | UMCINI
Ukumba ngempembelelo ephantsi, izinto ezisezantsi ze-abrasion ezinjengomdaka, isinyithi, kunye nokudityaniswa kokudityaniswa komhlaba kunye negrabile entle. Umzekelo: Iimeko zokumba apho ubomi bomntu jikelele bucebisa ngaphezulu kweeyure ezingama-800. Ngokwesiqhelo amaBhakethi oMsebenzi oBanzi ubukhulu becala zezona zinto zidumileyo, kwaye zisetyenziswa ngabaphuhlisi besiza ukukomba ngobuninzi kwizicelo eziphantsi zokukrala. Izakhiwo ezilula zinciphisa ixesha lokulayisha kwaye zonyuse ubunzima obunokuphakanyiswa. Iiadaptha zesayizi esemgangathweni kunye neengcebiso.
I-emele esemgangathweni luhlobo oluthandwayo kumbindi kunye nemini encinci, iyalungelelanisa ubukhulu beplate kwaye akukho nqubo yokucaca icacileyo. Olona phawu: umthamo webhakethi mkhulu, indawo yebhakethi yomlomo inkulu kwaye inendawo enkulu yokufumba, ke inendawo yokugcwalisa ephezulu, ukugcina ixesha lokusebenza kunye nokusebenza ngokukuko. Eli bhakethi lilungele indawo yokusebenza elula, njengokugrumba udongwe kunye nokulayishwa kwesanti, umhlaba kunye negrabile. Into engathandekiyo kukuqina kwepleyiti kuncinci, ukungabikho kwesityikityi sokuqinisa, ke ixesha lenkonzo lifutshane.
Sinikezela uluhlu olupheleleyo lweebhakethi koomatshini ukusuka kwi-0.01cbm ukuya kwi-12cbm kumthamo wamanzi kwizicelo ezininzi ezahlukeneyo. Ezi zicelo zibandakanya ulwakhiwo olulula nolubanzi, ulwakhiwo lweendlela nololiwe kunye namashishini okumba kunye nawokumbiwa kwemigodi.Senza zonke iibhakethi zentsimbi ezikumgangatho ophezulu ngentsimbi. Singabonelela ngokuncamathisela phantse kuzo zonke ii-excavator ze-brand.
Ngaphandle kwamabhakethi asemgangathweni, amabhakethi aRocky kunye neebhakethi zomsebenzi onzima, sikwanikezela ngeebhakethi zenjongo ekhethekileyo, ezinje ngeTilting emele, amabhakethi e-Hydraulic thumb, amabhakethi amaSkeleton, Ukucoca amabhakethi, Ukubamba iibhakethi, iharika, amabhakethi omhlakulo, iiripper, amabhakethi e-ripper, iibhakethi zokulayisha kunye nezinye iziqhotyoshelweyo zesikhuphi sakho.Ukupakisha kunye nokuhanjiswaUkuthengisa iiYunithi: Into enyeUbungakanani bephakheji enye: 20X20X20 cmUbunzima obukhulu bomntu omnye: 60.000 kg
Uhlobo lwephakheji:I-pallet esemgangathweni yamanye amazwe okanye ityala leenkuni. 1. enye ye-20GP ingalayisha malunga neziqwengana eziyi-12-14. 2. enye ye-40HC ingalayisha malunga nama-26-28 amaqhekeza e-1.0m3 okanye i-1.2m3 yeebhakethi ze-20ton excavator; 3. i-20GP enye inokulayisha malunga neziqwenga ezi-8 1.6m3 iibhakethi ze-30ton excavator; 4. enye ye-40HC ingalayisha malunga neziqwenga ezili-16 1.6m3 iibhakethi ze-30ton excavator.
Ubungakanani (Amacandelo) 1 - 2 3 - 10 11 - 20 > 20
Est. Ixesha (iintsuku) 15 35 49 Kuya kuthethathethwana
Kwimisebenzi yokumba nokulayisha yesiqhelo yodongwe, isanti okanye enye into evulekileyo engenankunkuma encinci okanye engenalo okanye ilitye elikhulu, ubume obugqibeleleyo buqinisekisa iipropathi zokumba ezigqwesileyo kunye nomthamo omkhulu.
Izinto zebhakethi zesiza
Iadaptha, amazinyo, umsiki osecaleni
Ubukhulu becala isetyenziselwa ukumba kunye nesanti, igrabile kunye
umhlaba kunye nokunye ukukhanya kokusebenza kwendalo.
Isetyenziselwa ukumba umhlaba onzima, oxutywe ne
Ilitye elithambileyo kunye nodongwe, amatye athambileyo kunye
omnye umthwalo wokukhanya kwindawo yokusebenza.
Q355B Kunye neNM460
Iadaptha, amazinyo, Icala lokusika /
Ubukhulu becala isetyenziselwa ukumbiwa kwegrabile enzima exutywe
Umhlaba onzima, ilitye elilukhuni okanye ilitye leqhwitha, emva
ukuqhumisa okanye ukulayisha, kunye nomthwalo onzima.
Iadaptha, amazinyo, umkhuseli osecaleni, Iimbombo zekona
Ikakhulu esetyenziselwa iimeko kakhulu lingonakali
kubandakanya i-quartzite ephezulu, i-slag eyaphukileyo,
ilitye lentlabathi kunye ne-ore.
Isetyenziselwa ukukhanya kwindawo yokusebenza encinci
abembi bezinto zakudala.
Isetyenziselwa imilambo, amachibi kunye nemijelo yendalo.
Ifakelwe umsebenzi wokucoca amajelo kunye nemisele.
Isetyenziswe ekudibaniseni i-sieving kunye nokumba
yezinto ezikhululekileyo noko.
AMANQAKU: I-OEM okanye iMveliso enokwenziwa ngokwezifiso iyafumaneka
Egqithileyo Ibhakethi elincinci lincinci encinci engama-70 ububanzi
Okulandelayo: Excavator rock emele